Xaqiiq: Is dabajoogga dhacdada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xaqiiq: Is dabajoogga dhacdada
Publicerat måndag 3 juni 2013 kl 10.14
16-18 Diseember 2012
Waxaa maalmahaan dhaqdhaqaaqyo xooggani ka socdeen koonto loogu magac-daray “gbgsorroz” oo la furay shabakadda Instagram. Waxyaalihii ku qornaa koontaas aad ayey u faafeen oo waxaa lagu qiyaasay in ay akhristeen dad gaaraya ilaa 8000 oo qof. Dhallinyaradii halkaas lagu sharafdilay waxay isugu jireen gabdho iyo wiilal dhashay intii u dhexeysey 1987 iyo 1999.
19 Diseember 2012
Boqolaal dhallinyaro ah ayaa weerar ku soo qaaday dugsiga sare Plusgymnasiet. Waxayna dhallinyaradaasi ku dulboodayeen baabuurtii waddooyinka taallay iyagoo weliba qalalaaso ka abuuray suuq-weynaha Nordstan. Intaas kadib waxaa dugsigii isku hareereeyey ciidamada boliiska oo baabuur iyo fardo fuushanaa. Waxaa goobtaas lagu qabqabtay dhallinyaro badan. Waxaa farta lagu fiiqay gabar 17 sano jir ah oo lagu eedeeyey in ay ka dambeysey falkaas dembiga ah, laakiin iyadu waa ay iska fogeysey eedeyntaas. Waxaana gabadhaas markii dambe khasab ku noqotay in u cararto meel qarsoodi ah oo ay ammaan ku hesho.
20 Diseember 2012
Qalalaasihii ayaa ku sii fiday dugsi kale oo lagu magacaabo Framtidsgymnasiet. Waxaana halkaas isugu soo baxay boqolaal dhallinyaro ah oo qaarkood wejigu u qarsoon yahay si ay u ogaadaan cidda ka dambeysey koontada Instagram. Halkaasna waxaa ka dhacay qaraxyo baaruud, dad bandanna boliiska ayaa gacanta ku dhigay.
4 Jannaayo 2013
Waxaa tuhunkii laga tirtiray gabadhii 17 sano ahayd oo halkaas ku yeshay eed-ka-qaadid kama dambays ah.
19 Jannaayo 2013
Labo qof oo dhallinyaro ah ayaa lagu wargeliyey in lagu tuhunsan yahay in ay geysteen aflagaaddoo foolxun.
21 Jannaayo 2013
Xeerilaaliyaha Annika Boman ayaa go’aamisay in dacwad lagu soo oogo labada gabdhood oo da’doodu kala tahay 15 iyo 16 sano. Intaas kadib waxaa boliiska loo soo gdubiyey ilaa 100 ashtako oo la mid ah aflagaaddadaas, laakiin xeerilaaliyuhu wuxuu go’aamiyey in aan kala bar oo bar wax baaritaan ah lagu samayn. Taasna waxaa sabab looga dhigay in aan kombiyuutarada laga helin wax caddeynaya in halkaas aflagaaddo ka dhacday ama cidda ka dambeysey. Dacwadda hadda la gudagalayo waxay khuseysaa 45 dhallinyaro ah oo kala dhashay 1987 iyo 1999.
3 Juun 2013
Dacwadda ayaa ka bilaabaneysa maxkamadda oo albaabadu u xiran yihiin maadaama la tixgelinayo da’da dhallinyarada ay dacwaddaani khuseyso.